Poise Laambad Miiska La Hagaajin Karo - Joornaalka Naqshadeynta
Laambad Miiska La Hagaajin Karo
Laambad Miiska La Hagaajin Karo Muuqaalka acrobatic ee Poise, laambad miis uu naqshadeeyay Robert Dabi oo ka tirsan Unform. Situdio wuxuu u kala gooshaa meel dhexaad ah oo firfircoon iyo muuqaal weyn ama yar. Iyada oo ku xidhan saamiga u dhexeeya giraankiisa iftiinka iyo gacanta gacanta ku haysata, xariijin isgoys ah ama xarig tol leh oo wareegga ah ayaa dhaca. Markii la dhigo sariir sare, giraanta ayaa dib u rogi karta shelf-ka; ama garaacidda garaaca, waxay taaban kartaa derbi ku wareegsan. Ujeeddada la-qabsashadan waa in la helo milkiilaha si hal-abuurnimo ku lug leh oo ula ciyaaro isha iftiinka iyadoo loo eegayo waxyaabaha kale ee ku xeeran.
Magaca mashruuca : Poise, Magaca naqshadeeyayaasha : Dabi Robert, Magaca macmiilka : unform.
Laambad Miiska La Hagaajin Karo Dabi Robert Poise